Hafanana, fihenan'ny hain-tany mena, lohataona ovy lohasaha, vokany amin'ny kalitao, fihenan'ny vokatra latabatra - Potatoes News
Alakamisy, Septambra 16, 2021
Ny tolotra izay nalain'ny toetr'andro mafana tamin'ny vokatra ovy Red Valley Valley 2021 dia tsy ho hita raha tsy manomboka ny fijinjana ao anatin'ny herinandro vitsivitsy, saingy efa mazava fa nisy fiatraikany tamin'ny vokatra sy ny kalitaony.
Gary Secor, mpikaroka momba ny zavamaniry ao amin'ny University of North Dakota State:
“Betsaka ny aretina ara-batana eto amintsika.”
Secor dia iray amin'ireo mpikaroka maro an'ny NDSU sy University of Minnesota izay niresaka tamin'ny Alakamisy 26 Aogositra, tao amin'ny Fikambanan'ny Mpamboly Ovy Andrefana Plains teo akaikin'i Larimore, North Dakota.
Mandritra izany fotoana izany, ny haintany dia nampihena ny vokatra ovy mena nambolena ho an'ny tsena vaovao. mpamboly manantena ihany anefa fa ny oram-be tato ho ato dia hanampy lanja ny vokatra ary hanamora ny fandavahana. Tantsaha manodidina ny 200 no nanatrika ny dingana voalohany tamin'ny fitsidihana ovy tany an-tsaha tao amin'ny Hoverson Farms akaikin'i Larimore mba handre ireo mpikaroka ovy manome vaovao momba ilay vokatra.
Taorian'ny famelabelaran-kevitra tamin'ny maraina dia nifindra tany amin'ny toeram-pikarohana voahosotra ny Fikambanan'ny Mpamboly Ovy Avaratra akaikin'ny Inkster, North Dakota, ary ny hariva, nankany Oberg Farms, akaikin'i Hoople, Dakota Avaratra.
Ny Red River Valley no mpamokatra ovy mena lehibe indrindra any Etazonia, ary North Dakota sy Minnesota mitambatra no faritra maniry ovy lehibe indrindra fahatelo ao amin'ny firenena. Ny mpamboly ovy any amin'ny lemaka avaratra dia manangona ovy manodidina ny 62% ho an'ny fanodinana endri-tsoratra, 10% ho an'ny voa, 12% ho an'ny kapoaka ary 16% ho an'ny tsena vaovao, hoy ny Fikambanan'ny Mpamboly Ovy Kely.
Ny toe-bidin'ny ovy avaratra Dakota Avaratra, izay misy ny fanodinana sy ny tahiry vaovao, tamin'ny herinandro nifarana ny alahady 23 aogositra, dia 8% tena mahantra, 14% mahantra ary 63% ara-drariny, hoy ny National Agricultural Statistics-North Dakota. Ny maso ivoho dia nanome 13% fotsiny ny vokatra tsara ary 2% tsara indrindra.
Tany Minnesota, toerana 20% ny ovy no nojinjaina hatramin'ny 23 aogositra, 61% ny vokatra no voadinika tsara, hoy ny National National Statistic Statistic Service-Minnesota. Ankoatry ny Red River Valley, ny ovy an'ny fanjakana dia maniry any amin'ny faritra Elk River sy Park Rapids any Minnesota ary any akaikin'i Albert Lea.
Ny fiakaran'ny hafanana sy ny toetr'andro maina nandritra ny vanim-potoanan'ny 2021 dia ny fiompiana ovy ao amin'ny Red River Valley izay tsy nisy aretina intsony.
Ohatra, tara-pahazavana, aretina ovy manimba ravina sy fantsona, dia tsy niseho tamin'ny vokatra tamin'ity taona ity. Mandritra ny taona mando, ny tantsaha dia tokony ho mailo amin'ny fanaraha-maso ny tanimbary sy ny famonoana fungisida raha mahita ny tara-pahazavana, aretina mety hiteraka fatiantoka manimba.
Na eo aza ny tanimbary avaratra atsinanan'i Dakota Avaratra sy avaratra andrefan'ny Minnesota nahazo orana vao tsy ho olana intsony ny fahatapahan'ny hazavana satria tsy misy fanafody mampivadi-po. Na izany aza, ny aretina ara-batana dia olana mety hatsaran'ny kalitao.
Ny mari-pana mafana mandritra ny vanim-potoana mitombo dia niteraka ireo korontana, izay misy ny hafanana anatiny sy ny fo poakaty.
Ireo aretina roa ara-batana dia tsy misy fiantraikany amin'ny fiarovana ny ovy, fa ny mpanjifa amin'ny ankapobeny dia tsy te hihinana ovy misy teboka volontany eo afovoan'ny ovy, izay mampiavaka ny nekrosis amin'ny hafanana anaty, na ovy misy ireo teboka mainty , izay mariky ny fo poakaty.
Ny fisehoana tsy mahaliana ao anaty ovy dia mety hiteraka fihenan'ny varotra miverimberina. Ny vokany amin'ny vokatra dia tsy azo antoka. Ny fijinjana ovy dia hanomboka afaka roa herinandro.
Hatreto dia tsara ny vokatra avy amin'ny Hoverson Farms, izay nampiantrano ny Fikambanan'ireo Mpamboly Ovy Avaratra tamin'ny Alakamisy, saingy mila mitombo habe ny tubers ao ambanin'ireo zavamaniry, hoy i Carl Hoverson, izay tompon'ny fiompiana miaraka amin'ireo zanany lahy, Mike sy Casey.
Eo ambanin'ny fanondrahana, ny Hoverson Farms dia mamboly ovy manodidina ny 5,400 10 hektara ho an'ny tsenan'ny fikirakirana, fikorisana ary ny latabatra. Hoverson Farms dia hanomboka hijinja ovy amin'ny 475 septambra, raha mamela ny toetr'andro, ary manantena ny vokatra eo ho eo amin'ny paosy XNUMX-kilao isaky ny hektara, hoy i Carl Hoverson.
Ny fijinjana ovy mena, nambolena ho an'ny tsena vaovao, dia hanomboka amin'ny tapaky ny volana septambra, hoy i Donavon Johnson, filohan'ny fikambanan'ny mpikarakara ovy. Nanombatombana i Johnson fa ny vokatry ny ovy mena, izay ny ankamaroany dia maniry tsy misy fanondrahana, dia ho salama. Ny vokatra ovy mena tsara dia avy amin'ny lanjan'ny 325 ka hatramin'ny 375, hoy izy.
Tranofiara vaovao 2 ho an'ny mpivarotra ovy Jolie